Bionyalux Care Fonosana Hoditra - Famolavolana
Care Fonosana Hoditra
Alatsinainy 27 Jona 2022
Care Fonosana Hoditra Ny fiheverana ny famerenana ny hoditra amin'ny vokatra skincare vaovao dia mifamatotra amin'ny enta-mavesatra tsy misy kitapom-batana kitapo, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny foto-kevitra ekolojika. Avy amin'ny toetoetran'ny vokatra amin'ny androm-piainan'ny sakafo voafetra mandritra ny 60 andro mandritra ny 30-andro fitsaboana ho an'ny fanatsarana ny hoditra, ny 30 sy 60 dia voafantina ho mariky ny fankatoavana ny vokatra ary ny dingana telo amin'ny fampiasana, 1,2. Ny 3 dia nampidirina tao anatin'ny vina.
Anaran'ny tetikasa : Bionyalux, Anaran'ny mpamorona : 33 and Branding, Anaran'ny mpanjifa : BIONYALUX.
Mpamorona ny andro
Ny mpamorona, ny mpanakanto ary ny arisialy tsara indrindra manerantany.
Asabotsy 25 Jona 2022
Ny famolavolana tsara dia mendrika hankasitrahana lehibe. Isan'andro, faly mampahafantatra ireo mpanaingo mahavariana izay mamorona endrika am-boalohany sy manavao, maritrano tena mahavariana, lamaody maoderina sy sary sokitra mamorona. Androany, manolotra anao ho iray amin'ireo mpamorona lehibe indrindra erak'izao tontolo izao izahay. Hamarino ny portfolio-endrika famolavolana mahazo ny loka ankehitriny ary mahazo fitaomam-panahy ho anao isan'andro.
Flow With The Sprit Of Water Zavakanto-Bahoaka Alahady 3 Jolay
Solar Skywalks Ny Fampahavitrihana Ny Pejin-Tongotra Asabotsy 2 Jolay
Alignment to Air Ny Maoderina 3D Zoma 1 Jolay
Fanadihadihana famolavolana ny andro Alahady 3 Jolay
Tantara momba ny andro Asabotsy 2 Jolay
Famolavolana ny andro Zoma 1 Jolay
Mpamorona ny andro Alakamisy 30 Jona
Ekipa mpamorona ny andro Alarobia 29 Jona
Care Fonosana Hoditra 33 and Branding Bionyalux